Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 30/04/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 30/04/2019
Rakhine State Peace and Stability Supporting Committee holds its second coordination meeting
Naypyitaw April 29
Rakhine State Peace and Stability Supporting Committee held its second coordination meeting at the Hluttaw Building in Nay Pyi Taw yesterday.
At the meeting, U Aye Tha Aung, Chairman of the committee recounted the committee’s first trip to Rakhine State, saying that the suggestions received by in meetings with Rakhine communities and political parties in Yangon and Sittway were much beneficial to the committee and the State. The discussions at the meeting focused on easing the conflicts in Rakhine State. In coming second trip, the committee would meet with experts, said the chairman.
Afterwards, the committee members took part in the discussion advising the committee to continue to hold discussion with local people to reduce the current conflicts, to fulfill the current needs and requirements before the rainy season, making further trips to Rakhine State and seeking ways for carrying out short-term and long-term plans.
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ျ
အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တို့ရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခများ ဖြေလျော့နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အကြံပြုချက်များ၊ တင်ပြချက်များကို ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တွေ့ဆုံမှုများမှ ရရှိလာသည့် အကြံပြုချက်၊ တင်ပြချက်များ သည် ကော်မတီအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက်သော်လည်းကောင်း များစွာအကျိုးရှိသည့် အချက်များ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် ခရီးစဉ် သွားရောက်သည့်အခါတွင် ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခများ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားရေး၊ လတ်တလော လိုအပ်ချက်နှင့် မိုးမကျမီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ထပ်မံသွားရောက်၍ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ဆောင်ရွက်ရေး၊ ရေတို၊ ရေရှည် ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များကို ဖော်ထုတ်သွားရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။